Apple achịcha ata aru - Ezi Ntụziaka
esi thicken beef stew na ite ite
esi esi nri anụ ezi ọbọp anụ ezi anụ medallions na oven
beef Chuck mock obi anụ Ezi ntụziaka
Achịcha apụl Apple bụ ụzọ dị mfe ma dị mfe iji nweta udara apụl gị na-eri nri na-atọ ụtọ! A na-eji obere udara apụl na-ejupụta na mpekere paịlị shuga na-etinye ya na ude mmiri ma ọ bụ ice cream zuru oke ọdịda.
Obi dị m ezigbo ụtọ na mụ na Flatout Flatbread® rụkọrọ ọrụ iji wetara gị usoro nhazi ọkụ a nke afọ.
M hụrụ n'anya ihe niile apụl achịcha sitere na Apple achịcha ka Apple achịcha akwa ! Nchikota cinnamon na apụl na-atọ ụtọ bụ mkpụrụ nke ọdịda na ụdị kpochapụwo ọ na-achọ tebụl ezumike ọ bụla mma ma ọ bụrụ na m nwere ikwu.
Achịcha Apple achịcha ndị a dị ụtọ dịka ha dị mfe! Ha nwere okpukpu kporo mara mma nke cinnamon shuga nwere ngwa nfe di n’uche di egwu nke na-ejuputa. Ihe ụtọ apụl apụl niile na-atọ ụtọ ị gaghị ezuru na aka dị mfe ijide!
Iji mee ngwa ngwa ndị a dịkwa mfe, m na-amalite site na eriri dị mfe emere Flatout Artisan Thin Pizza jikọrọ ọnụ. Ọ bụ ezie na pizza a na-eme pizzas kachasị ụtọ, ha zuru oke dị ka ihe eji megharịa ọnụ! Ị nwere ike chọta Flatout Artisan Thin Pizza Crusts dị gị nso ebe a , ha zuru oke maka topping na ụtọ ma ọ bụ savory!
Anyị na-ebipụ ha site na iji a 3.25 ″ gburugburu kuki cutter . Nke a na-eme ka ha bụrụ okpokoro zuru oke na tin muffin mgbe niile. Ọ bụ ezie na ha ga-abanye n'ezie na obere muffin pan, ọ na-eme ka o sie ike haju ha ka m wee tụọ aro iji pan ọkọlọtọ.
Jide n'aka na ị ga-etinye obere obere ihe fọdụrụ nke pizza jikọrọ ọnụ! Anyị na-etinye ha n'ime akpa friza na ihe ọ bụla fọdụrụnụ gbazee bọta na ụyọkọ cinnamon ọzọ, nye ya ịmụrụ aka wee sie ha na 375 degrees maka ihe dịka 10 nkeji. Ha na-eme paịlị paịlị na-atọ ụtọ!
M na-ahọrọ iji Granny Smith apụl maka Apple Pie Bites dị ka ha dị ntakịrị tart ma ghara inwe mushy na isi nri. N'ezie ị nwere ike iji ụdị apụl ọ bụla, isi ihe na-eme ka ị ghara ịmacha ha.
Otu ihe m hụrụ n'anya nke ọma na nhazi a bụ na ọ zuru oke maka inye igwe mmadụ nri dịka enwere ike ịme ya tupu oge eruo!
Enwere ike ime mkpokoro cinnamon ruo ụbọchị ise tupu ị jee ozi, mee ka ọ dị jụụ ma mechie ya na akpa ikuku. Banyere ndochi, m na-eme ya ụbọchị ozi ma hapụ ya na okpomọkụ ruo mgbe onye ọ bụla dị njikere iri nri. Ọ kachasị mma ma ọ bụrụ na a na-ejupụta shells tupu ị jee ozi.
Achịcha apụl a dị mfe na-arụ ọrụ nke ọma na dollop nke ude mmiri ma ọ bụ ice cream ma ọ bụ ọbụna obere scoop nke oyi pịa.
Oge Nkwadebe18 Nkeji Oge nri12 Nkeji Oge zuru ezu30 Nkeji Ọrụ18 Apple achịcha ata aru Onye edemedeHolly NilssonAchịcha apụl Apple bụ ụzọ dị mfe ma dị mfe iji nweta udara apụl gị na-eri nri na-atọ ụtọ! A na-eji obere udara apụl na-ejupụta na mpekere paịlị shuga na-etinye ya na ude mmiri ma ọ bụ ice cream zuru oke ọdịda. Bipute Ntụtụ
Cinnamon Sugar Shell Shell
▢1 ngwugwu Flatout Artisan Thin Pizza jikọrọ ọnụ Ogwu 6
▢½ iko bọta
▢⅔ iko shuga
▢1 ½ tablespoons pawuda
APPL PIE NA-EME
▢3 ọkara granny smith apụl
▢4 tablespoons shuga
▢1 ngaji ọka
Ikpokọta cinnamon & sugar na obere efere.
Bechapụ okirikiri atọ ¼ ″ site na nke ọ bụla Flatout Thin Crust Pizza Crust. Jiri mmesapụ aka na-ehicha akụkụ abụọ ma gbanye n'akụkụ ọ bụla na ngwakọta pawuda.
Pịa n'ime tebụl muffin nke tozuru etozu ma ghee nkeji 12-14 ma ọ bụ ruo oge edoziri.
Bee, isi na bee apụl n'ime aru sized iberibe.
Gwakọta bọta, pawuda, apụl, shuga, na mmiri mmiri mmiri abụọ.
Kpuchie ma sie nri na-akpali akpali oge ụfọdụ maka minit 5-7 ma ọ bụ ruo mgbe ọ ga-adị nro.
N'ime obere efere jikọtara ọka na mmiri tablespoons 2. Tinye na pan mgbe na-akpali akpali ma na-aga n'ihu na-esi nri ruo mgbe apụl dị nro (ọ bụghị mushy) ma na-ejuputa ndochi. Ka afụ 1 nkeji. Jụụ.
Tupu na-eje ozi ngaji apụl ngwakọta n'ime pawuda sugar shells. Top ude ma ọ bụ ice cream ma ọ bụrụ na achọrọ.
Calorisị:Ogbe 103,Carbohydrates:iri na iseg,Abụba:5g,Abụba Ajuju:3g,Cholesterol:13mg,Sodium:Anọmg,Potassium:35mg,Eriri:1g,Sugar:13g,Vitamin A:175IU,Vitamin C:1.4mg,Calcium:iri na otumg,Iron:0.1mg
Isiokwuapụl achịcha ata N'ezieDezaati Esie yaOnye AmericaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Kekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .
N'ụdị Apple achịcha Roll (video)
Apple achịcha Dumplings na naanị 2 Efrata
Apple achịcha Cupcakes